VaZvayi Vombomisirwa Basa kuHerald neNyaya yaVaGono naVaBiti
WASHINGTON — Mupepeti mukuru webepanhau reHerald, VaCeaser Zvayi, vambomiswa basa zvichitevera nyaya yakabuda mubepanhau reHerald neChitatu ichishora nekunyomba vaimbova gavhuna vebhanga guru renyika, VaGideon Gono, nekuti vakasarudza kumirirwa mudare nemunyori mukuru weMDC-T, VaTendai Biti, panyaya yavari kupomerwa yekuita zvehuori mumakore avo gumi vachishanda nebhanga guru renyika.
Mupepeti mukuru weZimbabwe Newspapers, Zimpapers Editor in Chief, VaPikirayi Deketeke, neChitatu manheru vakanyora tsamba kuna VaZvayi vachivamanikidza kumbonozorora kwemwedzi wose nyaya yavari kupomerwa ichiferefetwa.
Bepanhau reHerald rakumbirawo ruregerero kunaVaGono.
Vamwe vakuru mubato reZanu-PF, zvikuru vanonzi vari kuchikwata chemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru, vanonzi vari kudya magaka mambishi vachiti Herald yave kushandiswa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaJonathan Moyo, mukurwa hondo dzemuZanu-PF zvikuru kushoropodza chikwata chaAmai Mujuru ichirerekera kuchikwata chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo, VaEmmerson Mnangagwa.
Vaviri ava vanonzi vari kurwira kuda kuzotsiva mutungamiri webato, VaRobert Mugabe, asi vose vanoramba kuti vanotungamira zvikwata izvi.
Kunyange hazvo pachinzi pane kudhonzerana masimba, bumbiro remutemo reZanu PF rinoti kana chinzvimbo chemutungamiri wenyika chavapo, mutevedzeri wemutungamiri webato wekutanga ndiye anofanobata matomhu kwechinguva pasati paitwa sarudzo dzekutsvaga achatora chigaro chinenge chavapo.
Izviri pachena kuti Amai Mujuru ndivo vanofanobata matomu muZanu PF kudzamara paitwa sarudzo dzechigaro ichi.
Vanoona nezvemabasa muZanu-PF, VaDidymus Mutasa, mwedzi wapera vakagunun’una kuti Herald yainge yotora divi muhondo yemuZanu-PF mushure mekunge vanyombwa nebepanhau iri.
VaMutasa vakakwidza nyaya iyi kuPolitiburo yebato ravo iyo inonzi yakati VaMoyo vanofanira kumisa nyaya dzakadai kuburitswa mumapepanhau ehurumende sezvo vari ivo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko.
Asi VaMoyo neChitatu vakaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti havana kufara nemanyorerwo enyaya yaVaBiti naVaGono iyi. Vakatiwo VaGono vane kodzero yekutsvaga gweta ravanoda.
Mumashoko avo kuvatori venhau ekupindura zvainge zviri muHerald, VaGono vanotiwo nyaya iyi yapinda zvematongerwo enyika mukati uye vari kushora vakuru vezvemutemo munyika vavasina kudoma vachiti vari kuregedza VaMunyaradzi Kereke vachivasvibisa zita ravo pasina chavanoitwa.
Hatina kukwanisa kubata VaKereke, VaZvayi kana vamwe vakuru kuHerald avo vange vasingadaire nharembozha dzavo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe, VaShakespear Hamauswa, vashora kumbomiswa basa kwaVaZvayi vachiti vaifanira kutanga vamiswa pamberi pedare rinotonga vanokanganisa pabasa.